Njem ịgba ọsọ nke Darjeeling Hill Station | Kpọọ na 91-993.702.7574 maka ntinye akwụkwọ
Ugwu ugwu bụ mgbe niile ezumike ebe maka ọtụtụ n'ime ndị mmadụ. Ugwu dị na India bụ ọkacha mmasị nke òtù nzuzo nke onye ọ bụla. Obodo Darjeeling Hill Station Tour bụ ụzọ mgbapụ zuru oke site na mgbapụta obodo na ihu mmiri. A ma ama maka ebe a na-ere tii na ihe ọkụkụ, Darjeeling bụ otu n'ime ebe ndị a hụrụ n'anya na India. N'ebe a maka ezumike ezumike ma ọ bụ ezumike maka ezumike na ndị enyi gị, ezinụlọ gị na ndị ị hụrụ n'anya. Ogige Njem Ọchịchị Darjeeling Hill Station bụ nhọrọ kachasị mma maka gị, ma ọ bụ n'ihi na ị na-enwe ọhụụ, njem na njem. Ebe nlezianya anyị na-eme nlegharị anya na India ga-akpọrọ gị gaa njem ndị a dị egwu na India. Ebube nke ịbụ eze nke ugwu niile dị na mba ahụ ka okpueze. Plethora nke ikuku ohuru, ihe mara mma nke mara mma na mma ihu igwe nke district a na-adọta ọtụtụ puku ndị nlegharị anya n'afọ. Ebe a na-eme njem nleta Darjeeling Hill Station ga-enye gị ohere ịchọpụta ọnọdụ ebe a. Chọgharịa site na Darjeeling Hill Station Vacation Tour ma nye onwe gị akwụkwọ ezumike.
Mmemme 05 nke ehihie | 120 njegharị
Mgbe ụtụtụ nri ụtụtụ na-aga na ụlọ ọrụ nke ụlọ akwụkwọ na-emepụta ihe, Dordul Chholten stupa, ebe obibi Rumtek, Ropeway Ride na echiche Shanti. N'abalị na-anọ na GANGTOK.
N'ihe nke ụtụtụ na-aga n'ugwu Tiger iji hụ ọwụwa anyanwụ nke dị n'elu Kanchenjunga Mountains, En-ụzọ gaa na ebe obibi ndị mọnk Ghoom na Batasia aka. Mgbe nri ụtụtụ gara ileta ugwu ugwu Himalayan, Zoo Himalaya, Ụlọ Nzukọ Japan, Ogige Rock, Gangamaiya Park na Ogige Handicraft nke Tibet, En-ụzọ ị ga-enwe nlegharị anya banyere Ụlọ Ọrụ Darjeeling Tea. N'abalị na-anọ na DARJEELING.
Mgbe nri ụtụtụ na-apụ na Bagdogra Airport / New Jalpaiguri ọdụ ụgbọ okporo ígwè (96 km / 3 hrs) maka ịga n'ihu. Ụzọ na-aga ileta Pashupati Market (Nepal Border) na Lake Mirik (Ọdọ Mmiri Ara nke gbara ugwu na osisi pine gbara gburugburu). Ụlọ na-emechi.